Ejypta: Lavo, Tafarina Ary Lavo Indray i Omar Suleiman · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2012 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, polski, عربي, Español, русский, Ελληνικά, English
Nifamahofaho be ihany ny tontolo politika ejipsianina tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny 6 Avrily, nanambara ny firotsahany hofidiana ho filoha i Omar Suleiman, filoha lefitr'i Ejipta teo aloha sady lehiben'ny sampam-pitsikilovana. Heverin'ny Ejipsianina maro ho mpanohitra ny revolisiona i Omar Suleiman, na iray amin'ny “sisa niangana” mpanohana ny fitondrana teo aloha. Nisy ny fihetsiketsehana nataon'olona an'aliny teo amin'ny kianja Tahrir tamin'ny 13 Avrily ho fanoherana ny fampielezankevitr'i Suleiman. Nisy fivadihan-draharaha tampoka taorian'izay, izany hoe ny 14 Avrily tamin'ny filazana fa anisan'ny kandidà folo tsy afaka mifaninana amin'i fifidianana i Suleiman noho ny toa hoe tsy fahampian'ny sonia manohana ny firotsahany hofidiana.
Tamin'ny 14 Aprily Maikel Nabil Sanad, mpamahana bolongana sy mpikatroka fanta-daza, namoaka lahatsoratra bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Manohitra an'i Omar Suleiman”:
Inoako fa mazava tsara ny hevitro mikasika an'i Isiraely, saingy tao anatin'izany, manohitra tanteraka an'i Omar Suleiman aho. Ary nankafiziko tanteraka ny fanehoan-kevitra mamazivazy an'i Omar Suleiman sy ny fandefasana ny momba izany ao amin'i Isiraely… Misy fahasamihafany eo amin'ny mpikatroka milamina sy ny olo-panjakana mivaro-tanindrazana ho tombotsoany manokana, sa tsy izany?
Nanao antso avo ho an'ireo miahiahy amin'ny fandaharan'asa Islamika nentin-drazana tian'ny Mpirahalahy Miozolomana hotanterahina ao amin'ny firenena i Suleiman (anisan'izany ny kristianina Ejyptiana), ary nandresy lahatra koa izy fa hampitsahatra an'i Ejypta ho lasa “fanjakana ara-pivavahana”. Misy tokoa ireo mihevitra fa hahavita asa tsara izy. Timmy nisioka hoe:
@tamerhegab: Lazaiko ny marina, tsy mampaninona ahy raha ho filoha i Omar Soliman. Hiarina ny firenena ary handroso ao anatin'ny 4 taona; tsy hisy intsony ny Ikhwan [Mpirahalahy Miozolomana]. Tsara.
Tamin'ny 7 Aprily, taorian'ny fanambaran'i Suleiman ny firotsahany hofidiana, mpanao sariitatra politika Carlos Latuff namoaka ity sarin'i Suleiman ity izay mivoaka avy ao anaty fanariam-pako”:
Taorian'ny vaovao nanambara ny tsy fahazoan'i Suleiman mirotsaka, artist Hazem Arafa nanova ny sariitatra toy izao izy:
@mahagaber: Omar Soliman no kandidà tokana afaka manova ny antontan-taratasiny ahafahany mbola mirotsaka hofidiana – manana 48ora izy hanangonana ny “tawkeel” sonia ilaina.
Nanambara ny mpiasa misahana ny fampielezan-kevitr'i Suleimana fa hampiasaina avokoa ny fepetra rehetra momba ny lalàna mba handàvana ny fanapaha-kevitry ny Vaomiera misahana ny fifidianana.